Isiteleka samanesi eKZN nge-coronavirus - Ilanga News
Home Izindaba Isiteleka samanesi eKZN nge-coronavirus
Isiteleka samanesi eKZN nge-coronavirus
Akhala ngokufakwa egunjini labanalesi sifo engavikelwe
IZISEBENZI zesibhedlela sikahulumeni eManguzi, KwaMhlabuyalingana, zikhala ngokuphoqwa ukwenza umsebenzi ezingawufundelanga maqondana ne-coronavirus. Zithi kwazinsiza zokuzivikela azinikezwanga zona.Kulo mfanekiso
kutshengiswa ukuthi nabezempilo kufanele bazivikele kanjani kulolu bhubhane.
KUPHAZAMISEKE ukusebenza esibhedlela sikahulumeni eManguzi, KwaMhlabuyalingana, abahlengikazi bekhala ngokuphoqwa ukwenza umsebenzi abanga-wufundelanga.
Kusukela ngoLwesine nango-Lwesihlanu belungekho uzinzo kulesi sibhedlela esingesinye kwezine zaKwaZulu-Natal ezihlo-nzwe njengezifanelwe ukusetshe-nziswa ukwelapha abahaqwe wubhubhane lukasomqhele (coronavirus).
Laba bahlengikazi abangaphezulu kuka-17, baqale ukuhudula izinyawo ngoLwesithathu. Kabafuni ukungena egunjini okugcinwe kulona izisulu zaleli gciwane. Abanye babo bathi sebenikwe izincwadi zesexwayiso. NgoLwesihlanu ngezithuba zantambama, kungenelele izinyunyana zabo okubikwa ukuthi nazo zifike zehluleka ukukhulumisana nomqashi.
Lezi zisebenzi ezikhulume neLANGA ngaphansi kombandela wokuba kugodlwe amagama azo, zikhala ngokuphoqwa ukuba zingene kuleli gumbi ekubeni zingafundiswanga lutho ngokwelashwa kwalesi sifo esesiphendu-ke isiqhwaga emhlabeni jikelele.
Ngesikhathi sokuloba lolu daba, lesi sibhedlela besinabantu abawu-7 abalashelwa lesi sifo, kanti abebesolwa besingakadalulwa isibalo sabo. Phakathi kwalezi ziguli kubikwa ukuthi ezine zida-buka eGermany, bezifike kuleli ngokuzovakasha kwesinye seziqiwi zaseSt Lucia, eHluhluwe nabathathu abasuke eGoli.
“Thina kasinankinga nokuhlonzwa kwesibhedlela sethu
iManguzi ukuba kube ngesinye okuzolashelwa kusona lesi sifo. Vele lapha eManguzi kuyaziwa ukuthi siyayelapha i-TB enkulu (MDR) kodwa i-coronavirus kayifani futhi yisifo esiqalayo ukuvela.
“Ukungena kwethu laphaya, kusho ukubeka engcupheni impilo yethu. Bekungafanele kufakwe thina kuphela ngoba lena yimpi okufanele siyilwe ngokubambi-sana sonke siyizisebenzi zakulesi sibhedlela. Umphathi wethu usesabise ngokusixosha uma singafuni ukungena.
“Namanje kasithandi futhi ngeke sikwazi ukwenza umsebenzi ozoholela ekutheni kwathina sishiye imindeni yethu.
“Kazikho izinto ezibekiwe zokuba sizivikele ngaphandle kwama-gloves nensipho yokugeza izandla. Sizogeza izandla sibe siwavikele ngani amakhanda ethu?
“Kunikelwa ngathi ekufeni. Sinikwe izincwadi zokumiswa, zabuye zahoxiswa. Bekufanele ukuthi uma kuphakanyiswa isibhedlela sethu, kuthathwe thina nabanye siyofundiswa ngalesi sifo.
“Njengoba singenalo ulwazi nje, kusho ukuthi kasikwazi ukuqhubeka nokungena kuleli gumbi. Uma kuya ngokuthi kufanele kungenwe, naye umphathi wethu makangene, ayobingelela iziguli, athathe amathuluzi asebenze njengoba siwabekile thina,” kusho lezi zisebenzi.
Okhulumela umnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uNkk Noluthando Nkosi, uthe inhloko yomnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uDkt Sandile Tshabalala, ikhiphe isitatimende esiqinisekisa ukusatshalaliswa ngokwanele kwezinsizakusebenza kuzona zonke izibhedlela zakulesi sifundazwe.
“Kasikho nesisodwa isibhedlela esishoda ngezokuvikela. Sithanda ukuqinisekisa kuzona zonke izisebenzi zethu ukuthi sikwenze konke okusemandleni ukuthi sisabalalisa ngokwanele izinsiza-kusebenza okuhlanganisa namathuluzi okulwa nalesi sifo.
“Ngaphezu kwalokho, sibonga nezisebenzi zethu ezizinikele ekulwisaneni nalesi simo. Sizoqala izinhlelo zokuzifundisa ngaso ukuze kuzoba lula ukubhekana naso.
“Sigqugquzela nezisebenzi zethu ukuba zibike kusenesikhathi uma kukhona ezishoda ngakho ukuze sizokwazi ukuzilethela,” kusho isitatimende.
Previous articleUZuluboy usiza ezinkingeni zocansi
Next articlekuboshwe indoda ngokufa komkayo